Posted by ကို Tranquillus | ဇူလိုင်လ 2, 2018 | တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပြင်သစ်တွင်အလုပ်မလုပ်
သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့အနည်ထိုင်ခြင်းနှင့်ပြင်သစ်တွင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ထိုအခါသင်သည်ဆက်ဆက်ဖုန်းလိုင်းဖွင့်လှစ်ပြီးသင့်လျော်သော ISP ကရှာတွေ့ပါပြီ။ ဤတွင်ဘယ်မှာစတင်ရန်သိရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုဖြစ်ကြသည်။
သည့်အခါတဦးတည်းဆန္ဒ ပြင်သစ်မှရွှေ့ လ, နှစ်အဘို့, ကတဦးတည်းအင်တာနက် access ကိုမှအကျိုးရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းအထူးသဖြင့်ရှိလျှင်, တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းလိုင်းဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုမကြာခဏလိုအပ်ပေသည်။ ကတယ်လီဖုန်းလိုင်းဖွင့်လှစ်ဖို့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသတိပြုပါ။
အဆိုပါခြေလှမ်းများကအလွန်လျင်မြန်စွာပြည့်စုံန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့အားလုံးအသစ်ကနေထိုင်သူများကို enable လုပ်ဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံရောက်ရှိသည့်အခါအမှန်စင်စစ်, သတ်မှတ်ထားတဲ့သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းလိုင်း၏အဖွင့်များသောအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအော်ပရေတာတယ်လီဖုန်းလိုင်းတစ်အမြန်ကော်မရှင်ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်ပြီးတော့သေချာစေရမည်။
ဥရောပနိုင်ငံခြားသားများသို့မဟုတ် Non-ဥရောပကိုလည်းပြင်သစ်တွင်ဖုန်းလိုင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော်တော်များများအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါနှင့်ရွေးချယ်ထားအော်ပရေတာမှအခြို့သောစာရွက်စာတမ်းများပေးရပါလိမ့်မယ်။
ပြင်သစ်တွင်ဖုန်းလိုင်းဖွင့်လှစ်ရန်, သင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အော်ပရေတာကိုသိရန်ခွင့်ပြုနှင့်လိုင်းခွင့်နည်းပညာများဖြစ်သောရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, တကလိုင်းဖွင့်လှစ်ရန်နှစ်ခုနှင့်သုံးပတ်အကြားကြာပါသည်။ ဤကာလအတွင်းအဆိုပါအော်ပရေတာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဖတ်ရန် လျော်ကြေးနှင့် မီးဖွားခွင့်
ထက်ပိုမိုခြောက်လအဘယ်သူ၏လိုင်းမလှုပ်မရှားသည်အိုးအိမ်ရောက်ရှိနေသူနေထိုင်သူများအသစ်တစ်ခုလိုင်းကိုဖန်တီးရန်သူတို့ရဲ့အော်ပရေတာပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်အများစုမှာဒေသခံများ၎င်းတို့၏တယ်လီဖုန်းလိုင်းနှင့်အင်တာနက် access များအတွက်တူညီသောထောက်ပံ့ပေးသူကိုရွေးချယ်ပါ။
နိုင်ငံခြားသားများပြင်သစ်တွင်ဖုန်းလိုင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ fixed နှင့်မိုဘိုင်းလိုင်းများ၏အော်ပရေတာတုန်းပဲပြင်သစ်တွင်ဖုန်းလိုင်းဖွင့်လှစ်လိုသောသည်ဤနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများတစ်အရေအတွက်ကိုမျှော်လင့်ထား။ ကစာရွက်စာတမ်းများကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အရေအတွက်ကပေးဘို့သူတို့ဟာထို့ကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်။
အင်တာနက်နှင့်တယ်လီဖုန်းလိုင်းအော်ပရေတာအများစုသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုတောင်းဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့သည်တယ်လီဖုန်းလိုင်း (မိုဘိုင်း (သို့) ကြိုးဖုန်း) ဖွင့်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ခိုင်လုံသောနိုင်ငံခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ပွငျသစျဘာသာပြန်ချက်လက်တင်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးနေထိုင်ရာကဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေအိမ်သို့ပါမစ်, လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးစာအုပ်ငယ်သို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာကဒ်နှင့်အတူဥရောပသမဂ္ဂ၏အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကဒ်အဖြစ်ဝိသေသလက္ခဏာသက်သေပြ အဆိုပါကောင်စစ်ဝန်အခြေအနေန်ထမ်းများအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက။
ပြည်တွင်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအော်ပရေတာသာစာရင်းသွင်းသူတစ်ဦးငွေပေးချေမှုအဖြစ်တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်ယူစည်းကြပ်လို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဖုန်းဥပဒေကြမ်းများကိုလည်းစစ်ဆေးမှုများ, ဘဏ်ငွေလွှဲခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်သို့မဟုတ် SEPA တိုက်ရိုက်မြီစားလုပ်ပိုင်ခွင့်အားဖြင့်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
ပြင်သစ်တွင်ကြိုးမဲ့အင်တာနက် (internet Wi-Fi ကို) မှအကြိုး, ကတက်ကြွစွာဖုန်းကိုလိုင်းရှိသည်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒီခြေလှမ်းပြီးသွားချိန်ကသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်စွမ်းဟာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ဖို့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဖတ်ရန် သင်၏ payslip လိုင်းကိုတစ်ကြောင်းချင်းစီစစ်ဆေးရန်လေ့လာပါ
တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးရွေးချယ်ရာတွင်မီ, ၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ဖို့အချိန်ယူပါ။ အိမ်များအတွက်န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသလား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု at? ဘယ်နှစ်ယောက်ရာထူးကွန်ရက်ပေါ်တွင်တက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
အမြန်နှုန်းသည် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအတွက် တင်ပြရန် အရေးကြီးဆုံးဒေတာဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ အထူးသဖြင့် သင်သည် ကြီးမားသောဖိုင်များနှင့် ဖိုင်ကြီးများကို လွှဲပြောင်းခြင်းအလေ့အထရှိသောအခါတွင် ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ကွန်ရက်တစ်ခုတည်းတွင် စက်များစွာကို ချိတ်ဆက်သည့်အခါတွင်လည်း မြန်နှုန်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် ဝဘ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အကြံပေးခြင်းတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။e-mail,ဒါဆို စီးဆင်းမှုက သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုထည့်သွင်းန်ဆောင်မှုများ၏နံပါတ်ကိုလည်းအသုံးပြုသူအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ တချို့ကပံ့ပိုးပေး fixed လိုင်းများ, အင်တာနက် access ကို, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တစ်ဆော့ဝဲအစုအဝေးအင်တာနက်ကိုကမ်းလှမ်းမှုအတွက်တောင်မှမိုဘိုင်း packages များဆက်ကပ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အင်တာနက်များ၏စျေးနှုန်းအလုပ်အကိုင်လေ့လာသို့မဟုတ်ရှာပြင်သစ်တွင်ရောက်ရှိလာသောအထူးသဖြင့်အခါ, တွင်လည်းအရေးပါသောစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကမ်းလှမ်းမှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး။
အင်တာနက် access ကိုကမျးလှမျးခကျြကိုရွေးချယ်ပါ
packages များနှင့်အပေးအယူ, တဦးတည်းအားလုံးစျေးနှုန်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သာအင်တာနက်ကိုသုံးစွဲနိုင်ပူဇော်ကြောင်း Entry-level ကိုအပေးအယူရှိပါတယ်။ သူတို့ကအနည်းငယ်အရင်းအမြစ်များကို (အလုပ်အကိုင်များရှာနေကျောင်းသားများ, လူတွေ) နဲ့ပြင်သစ်တွင်ရောက်ရှိမည်သူကိုနိုင်ငံခြားနေထိုင်သူများအဘို့ကပိုအကျိုးရှိကြလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်လည်းဝှက်ထားသောကုန်ကျစရိတ်အာရုံစိုက်ရပေမည်။ အချို့သော Internet ပံ့ပိုးပေးတစ်ခါတစ်ရံပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ၏ငှားရမ်းခများပါဝင်သည်ကိုမဆွဲဆောင်မှုအခြေခံနှုန်းထားများပေါ်လာပါသည်။ အခြားသူများကကြေးပေးသွင်း၏ပထမလတွင်အကျိုးရှိသက်သေပြစေခြင်းငှါကန့်သတ်အချိန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆက်ကပ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကတိကဝတ်ကာလနှင့်၎င်း၏မသင်မနေရသို့မဟုတ်လုံးဝမဇာတ်ကောင်အာရုံစိုက်ရပေမည်။
ဖတ်ရန် ကွဲပြားခြားနားသောခွင့်အမျိုးအစား၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့အသုံးချမည်နည်း။
အင်တာနက် access ကိုရယူ၏လုပ်ငန်းစဉ်
အိမ်တွင် (သို့) ပြင်သစ်ရှိသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အင်တာနက်ကိုရယူရန်သင်သည်အင်တာနက်အော်ပရေတာအားအထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းအချို့ပေးရမည်။
ခိုင်လုံသောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း - ဥရောပသမဂ္ဂ၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ကဒ်၊ လက်တင်စာဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊
ပြင်သစ်ပြည်မတွင်ရှိသောစာတိုက်လိပ်စာပါရှိသောလိပ်စာအထောက်အထား - တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာဥပဒေကြမ်း၊ အခွန်အခ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊
ဥရောပနိုင်ငံခြားရေးနဲ့ Non-ဥရောပဿုံပြင်သစ်တွင်ဖုန်းလိုင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစကသူတို့အိမ်ပြန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အင်တာနက်တပ်ဆင်များအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများရရှိရန်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးကိုတောင်းဆိုဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ မိမိအပြင်သစ်နိုင်ငံအတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာဖြောင့်မတ်အားလုံးအင်တာနက်ကိုအော်ပရေတာနှစ်ခုဘုံအခြေအနေများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံခြားအမျိုးသားရေးထို့နောက်ပြင်သစ်၌မိမိနေထိုင် လိုက်. တယ်လီဖုန်းနှင့်အင်တာနက်ကမ်းလှမ်းမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဖုန်းလိုင်းဖွင့်ပါနှင့်ပြင်သစ်တစ်ဦးသည်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရှာတွေ့ သြဂုတ်လ 19th, 2018Tranquillus
အောက်ပါအွန်လိုင်းသင်တန်းပေးခြင်းပလက်ဖောင်း iBellule ၏တင်ဆက်မှု